ညသန်းခေါင် အချိန်မှာ ဆီးခနခနသွားရာကနေ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ? - Myanmarload
ညသန်းခေါင် အချိန်မှာ ဆီးခနခနသွားရာကနေ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ?
လွန်ခဲ့သော ၂ လ က 15:34 January 26, 2021
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ညသန်းခေါင် လူအိပ်ချိန်တွေမှာ ဆီးခနခနသွားတာမျိုးတွေက လူတော်တေ်ာများများကြုံဖူးကြပါတယ်။ ဒါဟာ အိပ်ခါနီး အရည်တွေအသောက်များတာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်သလို အခြားသောအကြောင်းအရာလေးတွေကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့် သန်းခေါင်အချိန်မှာ ဆီးခနခနသွားချင်ရတာလဲဆိုတာကတော့ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုရင် အိပ်ခါနီးမှ ရေသောက်ခြင်း၊ အရက် ဘီယာ သောက်ခြင်း၊ အချိုရည်၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်များ သောက်သုံးခြင်း စတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ ဆီးသွားတဲ့အခါ ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ ဟော်မုန်းနည်းနေတာကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအဆင့်တွေကျော်ပြီး နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ ဆီးလမ်းကြောင်းမှာ ပိုးဝင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ အချို့သောရောဂါတွေကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီးကြိတ်ရောဂါရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း ဒီလိုမျိုးခနခနဖြစ်နိုင်ပြီး ကလေးမွေးထားပြီး ဆီးအိမ်ကျုံ့နေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာ ညသန်းခေါင်အချိန်မှာ ဆီးသွားချင်တာကို အောင့်ထားပြီးမနက်ထိနေမယ်ဆိုရင် ကြာလာတာနဲ့အမျှ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်ခါနှစ်ခါ မဟုတ်ပဲ အိပ်ရေးပျက်လောက်တဲ့အထိ ဆီးသွားနေပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့သွားရောက်တိုင်ပင် ပြသသင့်ပါတယ်။